Mai Chibwe VekwaZimuto: Kudziya kwemuviri kunoitisa zemo.
Kudziya kwemuviri kunoitisa zemo.
Magadzirigwe akaitwa muviri wemunhu ndeekuti ukangohwa kudziya kwemuviri weumwe munhu zemo rotokwira. Izvi ndizvo zvinoitisa kuti paya kana mange mapopotedzana umwe akatanga kukumbira ruregerero umwewo opa ruregerero mombundikirana moita ma sori sori enyu henyu. Makambundikirana kudaro kudziya kwemuviri kunobva pamuri mese kuchienda kwamuri mese, woona mese matove ne zemo. Ukatarisa murume mmaziso unoona zvaari kutaura pasina mutauro zvave zverhoji. Iyewo akakutarisa mumaziso anohwa zvauri kutaura pasina mutauro kuti ndezverhoji chete. Kuya kupopotedzana kwamamboita kwatobuda mufungwa, fungwa yazara nezvimwewo. Ndipo paunobata ruoko gwemurume womutungamirira kuenda ku bedroom. Naponapo waakutopiwa chimwe chimwana chaunacho chisina kurumugwa.
Kana muvete murume achitoridza hake magwiriri kureva kuti avete hope chaidzo. Ukaswederawo pedo naye woisa ruoko womukwevera kwauri, hakuperi nguva zvivete zvisina kumuka asi iye magwiriri ake achinawo. Iwewo iunohwa pangepakaoma pava kuti nyeve nyeve nyeve kureva kuti fungwa yava nerimwewo gwara.
Apa handisi kuti garai muchipopotedzana. Ndiri kuti garai muchimbundikirana even muri mumubhedha kana kuti mukicheni. Ziva zvinhu zviviri, kupa murume zemo, nokubvisa murume zemo. Munhu itawo freedom mumba mako.
Posted by Mai E Chibwe at 06:02
Mwedzi wapera mari youya yobva yapera